Hoggaamiyaha Xisbiga Wadani oo ugu baaqay taageerayaashiisa in aysan aqbalin sharci ku tumashada – Kalfadhi
Ciidamada Booliska ee Somaliland ayaa xalay xabsiga u taxaabay Xoghayaha Guud iyo Afhayeenkii Xisbiga Waddani, waxaana arrintan cambaareeyay Guddoomiyaha Xisbiga C/raxmaan Cirro.
Xarunta xisbiga Wadani ee magaalada Hargeysa waxaa isugu soo baxay dad aan badneyn, halkaasina waxaa kula hadlay Cabdiraxmaan Cirro oo ah guddoomiyaha Xisbiga Wadani.
Cabdiraxmaan Cirro ayaa dadkii halkaas isugu soo baxay u sheegay in nabadgelyada ay ilaaliyaan, “sharci ku tumashadana aanay aqbalin”.
Arrintan ayaa timid kadib markii hogaamiyaha xisbiga Wadani, Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro uu shalay ku dhawaaqay in tagaeerayaasha xisbiga ay isugu soo baxaan xarunta xisbiga uu ku leeyahay Hargeisa, arrintaas oo ay ka digeen laamaha ammaanka.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa ujeedada isu soo baxa ku sheegay in ay doonayaan in uu soo bandhigo farriin muhiim ah oo uu sheegay in “qaranka lagu badbaadinayo”.
“Waxaa inoo cadaatay in Muuse (Madaxweynaha Somaliland) uu hayo muran iyo garnaqsi aan dhamaad lahayn, haddii kaalintooda ay gabeen goleyaasha Qaranka oo hawshan lahaa, maanta talada waxay u taalaa waxgaradka ummadaa, sida odayaasha dhaqanka, culliimaa’udiinka, ururada bulshada, abwaanada, sharciyaqaanada, saxaafadda iyo aqoonyahanada in ay isu tagaan, si ay u badbaadiyaan qaranimada, waana in la isugu yimaado madal Qaran”, ayuu Hargeisa ka yiri Cabdiraxmaan Cirro.
Hasayeeshee hadalkaas waxaa ku gacan seeray taliyaha booliska ee Somaliland oo sheegay in aysan jiri doonin wax bannaanbax oo lagu qaban karo Magaalada Hargeisa.
“Mudaharaadku sharci buu leeyahay, sharci wax aan waafaqsaneynna yeeli meyno, sababto ah dadkuu wuu wanaasagn yahay, laakin in xun baa dhex socota, yeeli meyno in dhibaato halkaas ka timaado”, ayuu yiir taliyaha booliska ee Somaliland.